Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Dad Shacab ah oo Caawa lagu dilay Xaafad kutaala magaalada Muqdisho
August 18 2017 15:37:34
Dad Shacab ah oo Caawa lagu dilay Xaafad kutaala magaalada Muqdisho
Warar goordhaw kusoo dhacay Warqabadka Shabakada Allbanaadir.com ee magaaada Muqdisho ayaa sheegaya in goordhaw rag hubeesan oo xirnaa dareeska ciidanka milatariga Soomaaliya ay dad shacab ah ku dileen Xaafada Warshada Caanaha ee Degmada Hodan.
Goobjooge ku sugan Xaafada Warshada Caanaha ayaa noo xaqiijiyay in rag xirnaa dareeska Ciidanka Milatariga Soomaaliya ay gaari caasi ah ku amreen in uu istaago balse markii uu kabiyo diiday rasaas culus ku furay.
Inta la xaqiijiyay sadax qof oo shacab ah oo labo kamid ah ay ahaayeen dadka xaafada ayaa ku dhintay rasaastaasi, waxaa sidoo kale ku dhintay rasaasta wiil dhalinyaro ah oo la sheegay in uu saarnaa gaariga rasaasta lagu furay .
Waxaa sidoo kale jira qasaaro dhaawac oo ka dhashay rasaasta ay raga hubeesan ku fureen gaariga ay wateen dad shacab ah, waxaana goobta ka baxsaday ciidamadii hubeesnaa ee rasaasta ku furay gaariga caasiga ah.
''Walaalow Ciidamada gaariga istaag ayey yiraahdeen darawalkana waa uu kasii socday rasaas ayeyna ku fureen rag hubeesan oo watay dareeska ciidanka milatariga, waxaa dhintay gabar iyo cunug yar oo saqiir ahaa oo wadad taagnaa iyo wiil kale oo gaariga saarnaa, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shilkaasi wiil yar oo gaariga jiiray '' Ayey tiri goobo jooge ku sugneed xalka uu shilku ka dhacay.
Xaafada Warshada Caanaha ee mashaqadan caawa ka dhacday iyo xaafadaha ku dhaw dhaw waxaa degan xeryana ku leh ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya, lamana oga ilaa hada halka ay qabteen ragii dilkan geestay.